Topnews:- Dowladda Somalia oo dimbi Qaran gashay ?
25 Janaury 2013 Waagacusub.com- Dowladda Somalia oo laga sugayo dib u dhiska iyo badbaadinta tiirarka Astaanta Qaranimada Somalia ayaa markii ugu horeeysay gashay dimbi qiyaano Qaran kadib markii ay Miisaaniyad sanadeedkeeda 2013 ku sargooysay Dollar. Gollaha Wakiiladda Somalia ayaa ansixiyay Miisaaniyad sanadeedka lagu sargooyay Dollarka iyadoo laga waayay Xildhibaan yiraahdo MA ANSIXINEYNO MIISAANIYAD LAGU SARGOOYAY LACAGTA DOLLARKA EE LACAGTEENA SHILLIN SOMALIGA HALAGU SARGOOYO.
Madaxda Dowladda Somalia oo aan weydiinay sababta Lacagta Qaranka Somalia ee Shilin Somaliga loogu sargooyn waayay Miisaaniyad Sanadeedka 2013 ayaa ku dooday in Shilin Soamliga tira badan yahay hasse yeeshee tani waxay ka dhigan tahay dimbi Qaran.
Waa Dowladii ugu horeeysay ee Miisaaniyad sanadeedkeeda ku sargooysay lacag qalaad taas oo micnaheedu yahay in meesha laga saaray lacagteena Shilin Somaliga si dalka Somalia looga isticmaalo Lacagta Dollar.
Faallo uu qoray Wariye Amiin Yusuf Khasaaro ayuu ku sheegay in Muqdisho lagu hardhay Boorar lagu dul sawiray Lacagta Dollar-ka taas oo lagu dulqoray CANSHUURTA BIXI.
Wariye Khasaaro oo Warbixin dheer ka qoray sida lacagteena loo qiimo dilay iyo Wadaniyad xumada Somalida wuxuu yiri "Mar aan tagnay Wadanka Marooko Hotelkii aan degnay ayaa naloo sheegay in Ciddi wadata Dollar aysan kala bixi Karin Hotelka , marka waxaan ku qasbanaaney in uu hotelka noo Sarifo si aan Magaalada uga soo Dukaameysano lacagta wadankaasi ,sidoo kale Wadanka Suudaan oo aan tagey Xitaa waxaan weyney Cid noo Sarifta anagoo ka baahan Dollar-kii aan haysaney ayaan dib ugu laabaney Muqdisho"
Waxaa in Dollar uu magac yeesho u sababa Shirkadaha Lacagaha ku Xawila Mobile-ka (Mobile Money Transfer ) oo Xitaa waxa uu gaarey in Koob Shaah lagu kala iibsado Dollar,waxayna Islaanta Shaaha iibisa aad Mobile -ka ugu Tuureysaa 10 Cent oo Dollar ah oo u dhiganta Saddex Kun Shillin Soomaali , marka waxay ahayd in Shirkadaha Isticmaalaan Lacagta Shilin Somaaliga si ay u taagnaato Astaanta Qaranka Soomaaliyeed.
Dadka Soomaaliyeed waxay yiraahdan “ Dhar Aaddan lahayn Dhaxan Kaama Celiyo sidaas darteed waa in Shacabka Soomaaliyeed isticmaalaan lacagteena Shilin-ka ,sidoo kalena waa in laga shaqeeyaa sidii Wasaaradda Maaliyadda iyo Lacagta loola tiigsan lahaa sharciga maadama ay gashay dimbi qiyaano Qaran.
Astaanta Jamhuuriyadda Somalia ee ka diiwaangashan Qaramadda Midoobay laguna xadgudbi karin waxaa ugu waaweyn.
1- Astaanta Calanka Somalia
2-Baaxada dhulka,Xaduudahiisa bad iyo barri.
4- Tirada Bulshada ku nool